परिवारको सदस्यमा कोरोनाभाइरस देखिएमा के गर्ने के नगर्ने ? जानिराखाैँ |
परिवारको सदस्यमा कोरोनाभाइरस देखिएमा के गर्ने के नगर्ने ? जानिराखाैँ
२०७६, १५ चैत्र शनिबार ०९:३१ March 28, 2020 ताजा खबरस्वास्थ्य
काठमाडौ । कोरोनाभाइरसको संक्रमण फैलदो अवस्थामा छ । नेपालमा अहिले सम्म ४ जना संक्रमित भेटिसकेका छन् भने थप देखिन बाँकी छ । कोरोनाभाइरसका लक्षण देखिनेहरुको अहिले परिक्षण भइरहेको छ । कोरोनाभाइरस देखिएमा वा नजिकको सदस्यमा देखिएमा के गर्ने के नगर्ने भन्ने दुविधा धेरैमा देखिएको छ । यस दुविधाका कारण धेरैमा त्रास समेत पाईएको छ तर परिवारको सदस्यमा कोरोनाभाइरसको लक्षण देखिएमा वा टेस्टमा पोजिटिभ देखिएमा आत्तिनु भने परिहाल्दैन । यदि आफ्नो परिवारको सदस्यमा लक्षण देखिएमा केहि सतर्कता अपनाउन जरुरी छ जसले गर्दा संक्रमण हुनबाट जोगिन सकिन्छ ।
– कोरोना भाइरसको लक्षण आफुमा वा परिवारमा देखिए जस्तो लागेमा नआत्ति डाक्टरलाई फोन गरेर बुझ्नुहोस् । डाक्टरको सल्लाह अनुसार मात्र परिक्षण गर्न तोकिएको अस्पतालमा जानुहोला । हत्तारिएर वा आत्तिएर घर बाहिर जाँदा संक्रमण हुन वा बढ्न सक्छ त्यसैले डाक्टरसंग फोनमा सल्लाह अनुसार मात्र परिक्षण गर्न जानुहोला । अहिले मौसम परिवर्तनका कारण पनि भाइरल फ्लु लागेको हुँदा डाक्टरसंग फोनमा परामर्श लिन जरुरी छ । फोनबाट परामर्श लिने नम्बरहरु यस प्रकार छन् :
– सुगर, कोलेष्ट्रोल, ब्लड प्रेसर जस्ता रोग लागेका र नियमित दबाई सेवन गर्ने व्यक्तिहरुले अस्पताल वा इमर्जेन्सी जानु अघि डाक्टरसंग परामर्श अवश्य लिनुहोला । उल्लेखित रोगहरुको लागि दबाई सेवन गर्दा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा कमि आउने हुँदा कोरोनाभाइरसले चाडै संक्रमित हुन सक्छ । त्यसैले डाक्टरसंग फोन मार्फत परामर्श लिएर उल्लेख गरे अनुसार जीवनशैली अपनाउनुहोस ।
– आफ्नो घरका परिवार सदस्यमा कोरोना भाइरसको लक्षण देखिएमा वा परिक्षण गर्दा पोजिटिभ देखिएमा के गर्ने भन्ने दुविधा देखिन्छ । सर्वप्रथम लक्षण देखिएमा डाक्टरसंग परामर्श लिन जरुरी छ । र एक जनामा समेत लक्षण देखिए झैं लागेमा अन्य सदस्यहरुले सतर्कता अपनाउन पर्दछ । झोल पदार्थ खाने, सेल्फ आइसोलेसनमा बस्ने र हरेक दिन ज्वरो नाप्ने गर्नुपर्दछ । ज्वारो आएमा सिटामोल खाने र सक्दो झोल पदार्थ खाने गर्नुपर्दछ । एकजनामा मात्र लक्षण देखिएमा सबै सदस्यहरुले बेग्लै कोठामा बस्ने र सतर्कता अपनाईहाल्नु पर्दछ । परिवारमा बच्चाहरु भएमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । बच्चाहरुलाई लक्षण देखिएका सदस्यहरुबाट टाढै राख्नु पर्नेहुन्छ ।
– परिवारका सदस्यहरुले एउटै कपडाहरु प्रयोग गर्न बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ । रुमालदेखि टवेल होस् वा ओछ्याउने तन्ना समेत बेग्लै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । जत्ता त्यत्तै छुने गर्नु हुन्न । लक्षण देखिएको सदस्यलाई ट्वाइलेट समेत बेग्लै प्रयोग गर्न दिनुपर्ने हुन्छ र यदि एउटै ट्वाइलेट भएमा उक्त सदस्यले हरेक पल्ट प्रयोग गरे पश्चात राम्रो संग सफा गर्नुपर्ने हुन्छ । डिटोल, सेनिटाइजर र साबुनको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । घरको सबै सदस्यहरुले घर भित्र समेत मास्क प्रयोग गर्ने, हातमा पन्जा लाउने गर्नु पर्नेछ ।
– लक्षण देखिएको सदस्यसंगै खाने वा टिभी हेर्ने वा गफ गर्ने बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ । सकेसम्म टाढै बसेर लक्षण देखिएको सदस्यलाई एउटा कोठा भित्र राखेर प्रसस्त झोल पदार्थ खान दिने गर्नुपर्छ ।
– यदि परिवारको एक जना सदस्यमा लक्षण देखिएमा सबै सदस्यहरुले घर बाहिर जान बन्द गर्नुपर्छ । सकेसम्म सबै सदस्य बेग्ला बेग्लै कोठामा बसेर १४ दिन सम्म सेल्फ आइसोलेसनमा बस्नु पर्ने हुन्छ । घर बाहिर जाने वा कसैसंग भेट्न बन्द नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।
– ज्वरो आएको ३ दिन सम्म नरोकिए वा तापक्रम १०२ भन्दा तल नघटे तत्काल डाक्टरसंग परामर्श गर्नुपर्ने हुन्छ ।